Ogaden News Agency (ONA) – Suuriya oo Lagu Eedeeyay Inay Shacabka Kiimiko U Adeegsatay.
Suuriya oo Lagu Eedeeyay Inay Shacabka Kiimiko U Adeegsatay.
Warbixin cusub oo ay gacan ka gaysatay Qaramada Midoobay (QM) ayaa muujinaysa in xukuumada Bashaar al Asad ay ka dambeysay weerarkii Kimikada ee ka dhacay Suuriya .
Warbixin ay soo saartay QM ayaa lagu sheegay in dowladda Suuriya ay ka dambeysay weerarkii Kiimikada ee lagu qaaday magaalada Khan Sheikhoun horraantii sannadkan . Weerarkan ayaa waxa ku dhintay ku dhawaad 90 qof. Baadheyaasha ayaa sheegay in Suntan waxyeelaysa neerfaha ee loo yaqaano Sarin, laga soo riday diyaarad.
Dowladda Suuriya ayaa horey u beenisay masuuliyada weerarkaasi. Weerarkan kiimikada oo dhacay bishii April ayaa sababay in Mareykanka ay weerar gantaalada kuruuska ah ku qaadaan saldhig ay leeyihiin ciidamada Suuriya.
Horaantii todobaadkan ayaa dowladda Ruushka waxa ay codka diidmada qayaxan ku hor istaagtay qorsha ay wadeen golaha ammaanka ee QM, kaasi oo lagu doonayay in baadhitaano dheeraad ah lagu sameeyo weerarkaasi kiimikada ah ee ka dhacay Suuriya. Danjiraha QM u fadhida mareykanka Nikki Haley ayaa sheegtay in warbixintan ay xaqiijisay run ay horey u sii ogaayeen.